सुन र चाँदीको मूल्य बढ्यो, कतिमा कारोबार भइरहेको छ आज ? - नेपाल कुरा
सुन र चाँदीको मूल्य बढ्यो, कतिमा कारोबार भइरहेको छ आज ?
काठमाडौं । आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य पनि बढेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजो सुनको मूल्य तोलामा ९० हजार ४ सयमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा दुई सयले बढेको हो । सोमबार पनि सुनको मूल्य तोलामा चार सयले बढेको थियो ।
महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार ६ सय रहेको छ भने तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार एक सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । आज चाँदीको मूल्य बढेर १३२५ पुगेको महासंघले जनाएको छ ।
आजको विनिमयदर, डलर सहित अन्य मुद्राको भाउ बढ्यो
नेपालको आर्थिक वृद्धि ०.६ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण